Ahụmịhe ndị ahịa mgbe azụtara | ECommerce ozi ọma
Susana Maria Urbano Mateos | | Ọzụzụ ECommerce, Ahịa ahia
Ahụmịhe ndị ahịa bụ isi na usoro ịzụta. Imirikiti ndị ọchụnta ego na igwe ojii maara mkpa ọrụ ndị ahịa dị na usoro ịzụta. Otú ọ dị, ọtụtụ na-elekwasị anya naanị na ngwa oru rue oge ngwaahịa a rutere n'aka ndị ahịa, na-echefu mkpa ọ dị ịnye ezigbo ọrụ ọbụlagodi mgbe azụtara ihe ahụ.
Site na ịgbatị usoro anyị usoro ole na ole anyị ga-enwe ngwaọrụ dị oke mkpa nke ga - enyere anyị aka mma anyị ahịa na-amụba revenue.
Akụkụ dị oke mkpa bụ ọrụ enyere ndị ahịa n'oge enwere obi abụọ banyere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị. Ọtụtụ oge nke a na-ezo aka na obi abụọ banyere arụmọrụ ma ọ bụ obere ndozi. Ọ dị mkpa na anyị nwere hotline, ma ọ bụ site na ekwentị ma ọ bụ site na weebụ, nke anyị nwere ike ibute ndị ahịa ụzọ, ebe ọ bụ na onye ahịa nwere afọ ojuju ga-abụ onye ahịa ọzọ.
Akụkụ ọzọ dị mkpa banyere dobe ọwa nkwukọrịta ya na onye ahịa mgbe ịzụrụ, bụ inwe ike ime ka ya maara nke ugbu a n'ọkwá na-enye. Mmemme ụgwọ ọrụ ndị na-eme mgbe niile nwekwara ike inye aka. Naanị ya zipu ozi Iji ezi obi "Daalụ maka ịzụta gị" ị nwere ike ime ihe dị iche n'etiti onye ahịa nwere afọ ojuju na onye na-enweghị afọ ojuju kpamkpam.
N'ikpeazụ, anyị nwere ike imechi agbụ anyị ruo mgbe anyị jụrụ onye ahịa banyere nke ya ịzụ ahịa. Nyocha ngwa ngwa na nkenke nwere ike ime ọtụtụ ihe. Ọ naghị afụ ụfụ ịnye obere mmezi ego iji gbanwere nyocha ahụ.
Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị ahịa ga-ajụ ya, a ga-enwe ngalaba dị mkpa ga-aza ya, na-enye anyị ohere ịmatakwu gbasara usoro ire anyị, yana ụzọ iji melite ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Ahụmịhe ndị ahịa mgbe ịzụrụ
Usoro ahia maka ụbọchị nne